World Leaders Denounce Zimbabwe Over Political Violence | Voice of America - English
Zimbabwe opposition leader Morgan Tsvangirai, who won the most votes in the March 29 presidential poll, has pulled out of the second round of voting due Friday. Peta Thornycroft reports from Harare that Mr. Tsvangirai said he cannot take part in the runoff because he does not want to legitimize Mr. Mugabe's war against the people of Zimbabwe. Zimbabwe Opposition leader Morgan Tsvangirai says he is pulling out of Friday's presidential runoff because of…
Zimbabwe's high court on Saturday lifted a ban on a rally for the opposition party, the Movement for Democratic Change (MDC), scheduled to take place on Sunday. For VOA, Peta Thornycroft reports from Harare that this is the first rally that the leader of the MDC, Morgan Tsvangirai, planned to attend since the campaign for the run-off election began. With the pre-poll violence escalating, many voters are worried about Sunday's MDC rally in Harare.The…